Hoavy mamirapiratra ho an'ny orinasa madinika izay mampiasa SEO: Fahitana avy amin'ny Semalt
Ny famaritana ny hoavin'ny orinasan-tserasera dia sarotra. Na dia izany aza, ny marketing amin'ny aterineto dia fotodrafitrasa fototra izay ahafahan'ireo orinasa madinika manangona mpanjifa an-tserasera Amin'ny tranokala Internet, ny tranokalanao dia afaka mahazo fahitana anaty aterineto, ary manasa mpanjifa maromaro an-tserasera. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ity lafiny ity dia ny Search Engine Optimization (SEO). Ny orinasam-barotra Small Business dia afaka midika ho tombony maro ho an'ny orinasa - real estate appraisers phoenix. SEO dia afaka manamboatra ny fandraharahana hahatratra karazany vaovao an-tserasera vaovao an-tserasera. Maro ireo orinasa mahomby no manana serivisy SEO ho an'ny orinasa madinika izay mamolavola ny fototra ijoroan'ny mpanjifa.
Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny SEO ho an'ny orinasa madinika dia ny ho avin'ny fahombiazany. SEO dia tetikady maharitra miaraka amin'ny mety ho fampiroboroboana ny orinasa. Maro ireo orinasa izay nanangana ny vohikalany amin'ny rafitra fitantanana ny votoatin'ny SEO ho an'ny orinasa kely dia manana tombontsoa maro. Nanomboka tamin'ny Janoary 2017, Google dia namoaka fanavaozana ny algorithm tao amin'ny motera Search. Vokatr'izany, ny mpandraharaha rehetra dia manana fahafahana hampiasa io fahafahana malalaka io ary hanao ny raharaham-barotra amin'ny fitakiana tsena amin'ny hoavy. Ny antony mahatonga ny raharaham-barotra tiany SEO hampanantena ny hoavy mamirapiratra ho an'ny orinasa madinika:
1. Mpanelanelana sy personalization.
Ny SEO dia afaka manao ny fikarohana sy ny paikady hikendrena olona iray manokana. Ohatra, ny dokambarotra kinendry dia tetikasan'ny SEO vaovao izay mahatonga ny fampiroboroboana ara-barotra amin'ny sehatra manokana.
2..Mitohy ny mpanjifa.
Ny SEO dia afaka mitondra tamba-tserasera izay manatsara ny fifandraisana amin'ny mpanjifan'ny mpanjifa ihany koa ary manome ny tsenan'ny tambajotra soso-kevitra momba ny asa ataony. Vokatr'izany, ireo orinasa dia afaka manao fanitsiana ilaina mba hanatsarana ny kalitaon'ny asa atolony.
3. Fitaratry ny raharaham-barotra sy ny fanadihadiana.
Ny rafitra fitantanana Content izay manohana ny orinasam-pitrandrahana SEO dia manana rafitra maro izay afaka hanome valim-panontaniana marim-pototra sy fanaraha-maso ny paikady ara-barotra eo amin'ny toerany. Ohatra, ny Google Analytics dia afaka manome fomba fijery manan-danja amin'ny fikarohana amin'ny teny keyword. Ny fomba hafa izay mety hahasoa ny SEO raharaham-barotra dia ny fanombanana ny fahombiazan'ny tetik'ady ara-barotra sy ny ROI.
SEO dia manana fitaovana sy rindrambaiko maro izay mahatonga ny dingana manontolo ho mora amin'ny mpizara Internet. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mikasa ny hiditra ao amin'ny sehatra an-tserasera satria izy io dia manjavona fotsiny. Ilaina fotsiny ny manangana tranonkala tsara ary manara-maso ireo endrika tsotra toy ny mamaly mailaka sy ny FAQ. Ny sisa dia miasa ho azy manokana. Ity raharaham-barotra ity dia afaka mihazakazaka tsy misy firaketana na fitsaboana entana ara-nofo. Afaka manampy amin'io ampahany io ny mpihaza.
Ny hoavy dia mamiratra ho an'ny orinasa madinika izay manana raharaham-barotra mahomby amin'ny aterineto. Amin'ity vanim-potoana niomerika ity, ny ankamaroan'ny orinasa dia manova ny paikady ara-barotra amin'ny fomba fanao amin'ny teknolojia dizitaly toy ny Social Media Marketing (SMM), Content Marketing, ary ny SEO. Maro ny mpamorona sy mpitantana vohikala ahitana fitaovana maro samihafa SEO. Rehefa misafidy sehatra fampiantranoana, manoro hevitra ny manam-pahaizana ny mampiasa ny rafitra fitantanana ny votoaty izay manolotra serivisy SEO ho an'ny orinasa madinika mba hankafizany izany. SEO ho an'ny orinasa madinika dia ny hoavin'ny fivarotana an-tserasera indrindra ireo vaovao izay mila marika marika aty anaty aterineto.